Silver Lake efulethini lux
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguZoran
Yonwabela amava anesitayile kule ndawo isembindini.
IApartment ibekwe kwiSilver Lake kufutshane neVeliko Gradište. Ifumaneka elunxwemeni, le ndawo inendawo yokutyela, igadi kunye nethafa kwisakhiwo.
Le ndlu inegumbi lokulala eli-1, ikhitshi elinesixhobo sokuhlamba izitya kunye ne-microwave, iTV enescreen esicaba, indawo yokuhlala kunye negumbi lokuhlambela eli-1 elifakwe ishawari. Indawo yokupaka yabucala yasimahla iyafumaneka, iitshaneli zecable tv, iNetflix kunye ne-wifi kwigumbi lokuhlala.
Ibala lokudlala labantwana, i-tenis kunye ne-mini yegalufa yomhlaba ziyafumaneka kwisiza kwaye zombini ukuhamba intaba kunye nokuloba kungonwatyelwa kwindawo ekufutshane neflethi. Ukukhwela iibhayisekile, i-electric scooter kunye ne-aqua park inokuba lukhetho lwakho ukuba uyonwabele.
I-Golubac yi-11 mi ukusuka kwiindawo zokuhlala, ngelixa i-Bela Crkva i-9.9 mi ukusuka kwipropati, inqaba yaseRam, indawo ye-Archaeological evela e-Roma Empire Viminacium. Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane yiVrsac Airport, 28 mi ukusuka kwiflethi.
49" HDTV ene-I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo